Sevha 25% uye nekuwedzera gumi muzana pamahedhifoni kubva kuSudio | IPhone nhau
Sevha 25% uye imwezve 10% pamahedhifoni kubva kuSudio
Headphone inogadzira Sudio iri pamberi peBlack Chishanu nemushandirapamwe wayo wehasha wegore uye inotipa isu kusvika munaNovember 11 iyo 25% dhisikaundi pane yayo yakawanda yeasina waya mahedhifoni pamwe neyakawedzera 10% iyo iwe yaunogona kuwana nekodhi yemutengo. iyo yatinokupa pazasi.
Wireless mahedhifoni ave chinhu chisingapatsanurike kubva kune yedu iPhone kunakirwa nemultimedia zvemukati needu smartphone nekuda kwekuvandudzwa mukuzvimiririra uye odhiyo mhando iyo yavakawana mumakore apfuura. True Wireless mahedhifoni akatiita kuti tikanganwe inonetesa tambo tambo yeakajairwa mahedhifoni, uye bhokisi ravo rekufambisa iro rinozvimisiridza panguva imwe chete rinotibvumidza kuti tigare takagadzirira kuvashandisa, tisingazviwani isu nekushamisika kusingafadzi kwekuti vapera bhatiri pataida ivo zvakanyanya.
Mahedhifoni TOLV-R Iwo ndiwo anodhura kwazvo echiratidzo asi ane maficha akanaka kwazvo. Maawa 5,5 ekuzvimiririra pamutero pamwe neanosvika maawa makumi maviri nemaviri ekuzvitonga kuzere nekuda kwebhatiri rakabatanidzwa mubhokisi rekutakura, rinotipa ruzha uye nyaradzo yekushandisa nekutenda kune otomatiki pairing. Iyo inobvumidza isina-ruoko basa mukufona, uye iine mabhatani epanyama ekudzora kutamba, mukuwedzera kune kuenderana neSiri (iOS) uye Google Mubatsiri (Android). Mutengo wavo wenguva dzose uri € 69 asi kusvika Mbudzi 11 ivo vanongodhura chete € 51,75, nemari yekutumira uye bhegi rezvipo remahara sesarudzo. Chii chimwe, Kana iwe ukashandisa iyo LPB kodhi iwe unowana imwe yekuwedzera 10% dhisikaundi (kusvika Mbudzi 11). Ivo anowanikwa mune akasiyana mavara pane yepamutemo Sudio webhusaiti (link)
Mahedhifoni Sudio TOLV Ivo vanovandudza pane zvakapfuura nekuda kwekuzvitonga kwakakura kunosvika kusvika kumaawa manomwe nechaji imwechete, uye maawa makumi matatu nemashanu mukushandisa bhatiri-kesi. Iyo ine Bluetooth 7 tekinoroji ine huwandu hunosvika pamamita gumi nemashanu, saka rusununguko rwako rwekufamba usingatakure iyo iPhone yakakura kwazvo. Mutungamiriri we graneo anotipa yakanaka mhando kurira, pamusoro pekusanganisira isina maoko-mabasa uye kuenderana neIOS uye Android vabatsiri. Mabhatani anotibvumidza isu kudzora kubereka, uye anowanikwa mune akasiyana mavara. Mutengo wavo wenguva dzose uri € 99 asi nekuda kwekusimudzirwa kwazvino vanogona kutengwa ne € 74,25 kusvika Mbudzi 11, mari yekutumira inosanganisirwa uye neyemahara chipo bhegi sarudzo. Kana iwe ukashandisa iyo LPB kodhi iwe unowana imwe yekuwedzera 10% dhisikaundi pane webhusaiti yeSudio (link)
Kana izvo zvauri kutsvaga chiri imwe nzira kune Apple's AirPods Pro, izvi Dzidza ETT Iyo sarudzo huru, yemabhenefiti uye nemutengo. Iine kuzvitonga kuzere kweanosvika maawa makumi matatu nechaji yekuchaja, isina waya kuchaja, kudzikisira ruzha modhi, otomatiki kujeka nzira panguva yekufona, mu-nzeve dhizaini ine inochinjika nzeve mapads uye IPX30 chitupa chinoita kuti dzikunde kunaya uye ziya, Izvo zvakanaka mahedhifoni ezuva nezuva, chero chiitiko chaunoita, kunyangwe mitambo. Mabhatani avo epanyama anodzora kutamba, uye otomatiki hunyowani kubatana kunoita kuti zvive nyore kushandisa nemidziyo yakawanda. Mutengo waro wenguva dzose ndeye € 149 asi kusvika Mbudzi 11 ivo vanodhura € 107,28 neinezve 10% vachishandisa kodhi yeLPB, mapositi anosanganisirwa uye nehomwe yechipo yemahara Unogona kuzvitenga pawebsite yeSudio (link) mumarudzi akasiyana siyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Sevha 25% uye imwezve 10% pamahedhifoni kubva kuSudio
Apple Inoburitsa Dhizaini Dhizaini yeNew MagSafe accessories